Gwen Rakotovao: ‘Manamafy Ny Fifandraisana Ara-tsosialy’ Amin’ny Alalan’ny Dihy Sy Ny Kanto · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i GV Sub-Saharan Africa
Voadika ny 17 Febroary 2016 2:59 GMT
Vakio amin'ny teny русский, English, Español, Ελληνικά, Nederlands, Français
Gwen Rakotovao, mandritry ny fampisehoany. Miaraka amin'ny fahazoandàlana avy aminy.
Mahafinaritra ny maripàna ho an'ny harivarivan'ny volana Febroary any Paris.
Nihaona tamin'i Gwen Rakotovao tao amin'ny trano fisakafoana izahay, tany amin'ny boriboritany faha-14, izay falifaly lalandava ilay mpisahana ny toerana . Miarahaba anay an-kafaliana izy ary manontany raha mila tsakitsaky izahay. Fenon'ireo hira Malagasy milamindamina, fa mamelombelona, ilay efitra. Tonga i Gwen avy eo. Feno tsiky lehibe ny tarehiny, miala tsiny ny amin'ny nahatara kely azy ary manazava fa vao avy namita famerenana tena manan-danja ho an'ny fiarahamiasany manaraka amin'ny Nizeriana iray mpanao dihy mirindra izy.
Efa nitondra azy nanerana ny tany ny asan'i Gwen Rakotovao izay mahafanina, amin'ny maha talen'ny zavakanto, lehiben'ny fitantanana, lasibika, ary mpanoratra boky ho an'ankizy azy. Efa zavatra miaina amin'ny fiainana haingankaingana izay mahafanina izy, araka ny voamarin'ireo asa vitany.
Avy amin'ny fianakaviana Malagasy i Rakotovao ary lehibe tany Normandia. Efa hatramin'ny mbola kely, naniry ny “hiaina tanteraka ny fiainana feno” izy. Fony ankizikely, faniriany ny ho lasa mpisolovava , fa avy eo tratran'ny aretin'ny dihy izy. Tamin'ny faha-17 taonany, miaraka amin'ny bakalorea am-paosy afaka ampiasainy, niala tao an-trano izy mba hanaraka fiofanana matihanina tao amin'ny Rick Odums Dance Institute ao Parisy. Avy eo izy nandeha tany an-Tanànan'i New York, toerana nidirany tamin'ilay toeram-pianarana malaza Alvin Ailey American Dance Theater School.
Na zara raha manana fotoana hipetrahana aza izy, nanaiky niresaka tamin'ny Global Voices i Gwen, mikasika ny fijeriny ny anjara asany amin'ny maha mpanao kanto azy ao anatin'ny tany miovaova foana.
Gwen Rakotovao eo an-tsehatra. Miaraka amin'ny fanomezandàlana avy aminy.
Global Voices (GV): mpandihy ianao, mpanao dihy mirindra, lasibika, ary mpanoratra. NIpetraka valo taona tao New York ianao, izay nanangananao ny tarika mpandihy anao manokana, ny Gwen Rakotovao Company. Raha manao jery todika ireo zavatra rehetra vitanao taminao mbola tanora ianao, tsy mahafanina anao kely ihany ve izany? inona no mandrisika anao hihetsiketsika haingana amin'ny fotoana rehetra?
Gwen Rakotovao (GR): Marina fa manana zotran'asa mahafinaritra aho ary nahavita zavatra betsaka, saingy tsy dia mipetraka firy amin'ny lasa aho. Feno zavatra maro tsy hay soritana mialoha ny fiainan'ny mpandihy sy mpanao dihy mirindra, noho izany, aleoko mifantoka amin'ny ankehitriny sy ny hoavy akaiky. Amin'ny maha mpanakanto ahy, manana zavatra maro tiako ho tenenina mikasika ny fiovàna tiako ho hita amin'ny tany aho. Izany no manainga ahy mifoha maraina ary mitantana ahy rehefa tonga amin'ny làlako ireo sàkana. Ny faniriako handray anjara amin'ny fiovàna no mandrisika ahy hamorona, handihy, hanoratra, sy ny sisa.
Ampahatsiahivin'i Gwen antsika hoe avy amin'ny fianakaviana mpahay zavakanto izy. Misy ifandraisany amin'i Bekoto mpihira izy, mpikambana ao amin'ilay tarika Malagasy fanta-daza Mahaleo. Ito ambany ito misy lahatsary voarakitra tao amin'ny fetiben'ny dihy New York, izay nandihizan'ny Gwen Rakotovao Company tamin'ny “Lendrema,” singan'asa novokarina sy nohirain'i Bekoto.
GV: Amin'izao, miara-miasa amin'ny mpanao dihy mirindra Nizeriana ianao. Ahoana ny fijerinao ny fivoaran'ny dihy any Afrika, ary inona avy ireo zavatra tena manan-danja na toetoetran'ny dihy Afrikana izay tsy fantatr'ireo vao miantomboka?
GR: Tanibe itambaran'ireo firenena maro sy kolontsaina marolafy i Afrika, araka izany, misy karazana fandihizana sy mpandihy samihafa maro, noho izany, sarotra ny manome famintinana amin'ny fehezanteny vitsivitsy.
Ny zavatra iray tsy azo lavina izao, hoe ao Afrika, misy maro ireo tanora mpanao kanto tena manan-talenta, izay te-hisondrotra ary hanao fiovàna, mba ho lasa mpisolo tena ny tanibe. Ary mahafinaritra foana ny mihaona sy miresadresaka amin'izy ireo.
GV: Misy didon'ireo dihy samihafa avy amin'ireo kolontsaina rehetra ny endriky ny dihin'ny tarikao. Zavatra tianao hampisehona mazava ve ny lohahevitra fahamaroana — izany lohahevitry ny fahasamihafàna izany ve no nosafidianao hasongadina – io ve no fomba entinao hametrahana ny fahamaroan'ny kolontsaina?
GR:Tsy tena safidy loatra io; izany mihitsy aho. Teraka taty Frantsa aho, avy amin'ny ray aman-dreny Malagasy. Efa natao haneho ny fahamaroan'ny kolontsaina mialoha mihitsy aho. Natao hanitarana io endriky ny fahamaroan'ny kolontsaina ato anatiko io fotsiny ny ampahany New York. Tsy zavatra mora sahanina loatra ny fananana kolontsaina telo ao anatin'ny tontolo izay aleon'ny olona miditra ho mpikambana ao anatina vondrona iray noho ny tahotra ho ahilikilik'ireo hafa. Hatramin'ny fahazazako, nisafidy ny hanaraka ny maha-izaho ahy aho, olona nipongatra avy tao anatin'ireo kolontsaina samihafa. Ary faly aho manao izany, na tsy mora mandrakariva aza izany.
GV: “L'Amour, La Liberté” (Fitiavana, Fahalalahana) izany no lohatenin'ny iray amin'ireo singan'asanao. Nanorina fandaharanasa iray ho an'ireo ankizy sahirana sy kamboty ihany koa ianao amin'ilay Ketsa Centre (Ivontoerana Ketsa) any Vontovorona, Madagasikara. Afaka milaza ianao hoe olona mandray andraikitra ara-tsosialy. Inona ireo olana ara-piarahamonina tena mahaliana anao, ary inona no mety ho anjara andraikitry ny dihy amin'ny fiarahamonina ankehitriny?
GR: Dihy, tiako tenenina aza hoe ny kanto, amin'ny ankapobeny, dia fitaovana koltoraly tena ilaina ho an'ny fiovàna, ary manana anjara asa lehibe eo amin'ny fiarahamonintsika. Mieritreritra aho hoe ny hampita hafatra no anjara andraikitr'ireo mpanakanto rehetra. Ny ahy izao hafatra fanantenana tsotra hisian'ny tontolo tsaratsara kokoa. Mino aho fa indray andro any, na eo aza ireo fahasamihafantsika, afaka miara-miaina milamina miaraka isika. Mbola nofinofy izany izao, fa izany anefa no itsanganako ary izany no antony andraisako andraikitra.
GV: Misy ampahany amin'i Gwen tsy fantatry ny vahoaka amin'ny ankapobeny ve izay tianao hozaraina?
GR: Mieritreritra aho fa namintina ny amiko tsara ilay tafatafa, fa mpanonofy be i Gwen [mitsiky].
GV: Misaotra anao Gwen, ary mirary soa amin'ireo tetikasanao rehetra!
Misaotra betsaka an'i Patrick, aka Pitchboule, izay nanampy nikarakara ito fihaonana sy tafatafa ito.